News Collection: सेक्स गर्दा नक्कली दाँत निलेपछि खुत्रुक्कै
सेक्स गर्दा नक्कली दाँत निलेपछि खुत्रुक्कै
आखिर काल आएपछि कसैले पनि रोक्न सक्दैन । यस्तै भएको छ ताइवानका एक वृद्धलाई । नक्कली दाँत निलेपछि ७४ वर्षका एक वृद्धको ज्यान गएको छ । खाना खाँदा वा पानी पिउँदा उनले नक्कली दाँत निलेका होइनन् । एक वेश्यासँग सेक्स गर्ने क्रममा अकस्मात दाँत निलेछन् ।
७४ वर्षका चेन नामका ती वृद्धले न्यू ताइपेइ सहरमा ६२ वर्षकी एक वृद्धा वेश्यासँग सम्भोग गर्ने क्रममा उक्त घटना घटेको हो । आफ्नी श्रीमतीबाट अलग्गीएर लामो समयदेखि ती वेश्यासँग संसर्ग गर्दै आएका चेनलाई त्यस दिन कालले कुत्कुत्याएको रहेछ क्यारे ।
झण्डै ३० मिनेटको यौन क्रिडापछि तृप्त भएर चेनले उठेर ती महिलालाई पैसा समेत तिरे । तर जब कपडा लगाउन के थालेका थिए फुत्रुक्कै भुइँमा लडिहाले ।
आफ्नो ग्राहक लडेपछि ती महिला आत्तिइन् । बुढो मान्छे सम्भोगमा शक्ति खर्च भएर कमजोरीले लड्यो होला भन्ने लाग्यो । उनले लडेका ती बुढालाई उठाउन् खोजिन् र ओल्टाइपल्टाइ गरिन् । तर ती वृद्धले फुस्रा आँखा पल्टाएपछि भने झसँग भइन् र प्रहरीलाई खबर गरिन् । प्रहरी आएर ती वृद्धलाई अस्पताल लग्यो र अस्पताल लैजाने बित्तिकै मृत घोषित गरियो ।
सुरुमा उनको ज्यान जानुको कारण थाहा भएन । तर जब पोष्ट मार्टम गर्ने क्रममा उनको घाँटीमा नक्कली दाँत अडि्कएका फेला परे तब मात्र थाहा भयो उनको मृत्युको कारण । सायद सेक्सका क्रममा बढि उत्तेजित भएर उनले नक्कली दाँत निलेको पनि थाहा पाएनन् फलस्वरुप घाँटीमा गएर दाँत अडि्कए र स्वासप्रस्वास रोकिएर उनको ज्यान गयो । च्व ! च्व ! त्यो उमेरमा पनि कस्तो भोग्नुपरेको ती हजुरबालाई ।